Naaton’ny Miaramila Thailandey Ilay Famelabelaran-kevitry Ny Oniversite Momba Ny “Fanjakana Tsy Refesi-Mandidy”, Tazoniny Ireo Profesora. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2014 8:24 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, English
Ny herinandro lasa teo, nikarakara famelabelaranèkevitra ho an'ny daholo be momba ny “fianjeran'ny fitondrana tsy refesi-mandidy any amin'ireo firenena sasany”, ny andiana mpianatra avy amin'ilay Oniversite manana ny hajany, Thammsat. Na dia momba ny firenena sasany aza no tena nifantohan'ny adihevitra tao, nanapa-kevitra ny hampangina izany ny governemanta noho ny fiheverany fa manakaiky loatra ny zava-misy ankehitriny ao Thailandy ilay lohahevitra.
Ny Praiministra amperinasa ao Thailandy no lehibe mpibaiko ny foloalindahy izay nanao fanonganam-panjakana tamin'ny volana Mey. Tonga dia nanamboatra lalàm-panorenana nifanaraka tamin'izay ny foloalindahy, nanendry ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera mpanao lalàna, ary nanendry ny mpiarika ilay fanonganam-panjakana ho toy ny Filoham-pirenena. Na dia teo aza ny fanendrena mpikambana vaovao ao amin'ny governemanta, mbola manohy ny fandraràna hetsi-panoherana sy ireo famoriana olona dimy na mihoatra hatrany ny foloalin-dahy, ho fanampin'ny fanaraha-maso hentitra ny gazety ho an'ny daholo be. Rahonana hotoriana ary mety hogadraina mihitsy aza ireo izay mihantsy ny foloalindahy.
Raha nanoritsoritra ny fitazonana am-ponja ho toy ny “fanasàna” ho any amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana ny Praiministra Thailandey, nanamarika ny avy ao amin'ny “The Bangkok Post” fa nahazo “fanitsiana fitondran-tena” nandritra ny fitazonana azy ireo nanao ny hetsika.
Mpampianatra mpikaroka 16 no nanao sonia fanambaràna iray izay manameloka ny zavatra nataon'ireo miaramila:
Nanentana ny governemanta hampiato ny fanohintohinana ny fahalalahana akademika i Brad Adams, talen'ny Ivon-toerana Misahana ny Zon'Olombelona any Azia: